Altai Massif: toetra, fiaviana, toetrandro ary biodiversité | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Portillo Alemanina | 07/04/2021 16:00 | Haibolantany
Androany isika dia hiresaka momba ny iray amin'ireo tandavan-tendrombohitra hita any Azia afovoany izay malaza indrindra amin'ny toerana misy azy, hoy i Russia, China, Mongolia ary Kazakhstan. Momba an'io Altai massif. An'ny tandavan-tendrombohitra Altai izy io ary mihaona ny ony Irtish, Obi ary Yenisei. Tany feno angano sy angano efa nampitaina hatramin'ny taranaka fara mandimby. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanjary tany iray nahafahan'ny natiora nampiseho ny zavatra rehetra azony atao.
Noho izany dia hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao ny toetra rehetra, ny fananganana ary ny niandohan'ny Altai massif.
2 Ny niandohan'ny massai Altai
3 Tahirin-jeografia an'ny Altai massif
4 Toetrandro sy biodiversité
Massif iray izy io izay eo amin'ny tandavan-tendrombohitra any Azia afovoany ary any i Russia, Mongolia, China ary Kazakhstan no mihaona. Misy steppe midadasika, kirihitrala taiga matevina sy hatsaran-tarehy mahafinaritra any an-efitra. Izany rehetra izany dia miakatra ao amin'ny fasana mamirapiratra tampon'ny lanezy miaraka amin'ny hatsaran-tarehy laconic ny tundra. Ny andian-javaboahary misy eo amin'ity faritra ity no mahatonga ny toerana ho tena tsara tarehy tsara tarehy. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanjary toerana malaza be ho an'ny mpizahatany ny mandeha mitsangatsangana.
Toerana iray mandroso izy io efa ho 2000 kilaometatra ny halavany avy any avaratra andrefana ka hatrany atsimo atsinanana. Noho izany, ny Altai Massif dia mamorona sisin-tany voajanahary eo anelanelan'ny steppe maina ao Mongolia sy ny taiga manankarena atsimon'i Siberia. Samy mamorona tontolo misy fahasamihafana tampoka ny faritra roa tonta. Ny marina dia ny fahasamihafana marobe amin'ny endrika misy ao amin'ny Altai massif dia toy ny hoe mihodina amin'ny pejin'ny jeografia atlas isika.
Tsy ny hatsaran-tarehy ihany no lasa hatsaran-tarehy hahafahan'ny zanak'olombelona mitsidika azy, fa akanin'ny karazan-javamaniry sy biby an'arivony maro.
Ny niandohan'ny massai Altai
Ho hitantsika eo ny niavian'ny tendrombohitra sy ny fivoarana nandritra ny taona maro. Ny niandohan'ireto tendrombohitra ireto dia azo averina amin'ny herin'ny tektonika misy noho ny tektonika takelaka. Fantatsika fa ny takelaka tektonika dia mihetsika hatrany noho ny onjam-pifanarahana amin'ny lamban'ny Tany. Io dia mamela ny takelaka hidona sy hiteraka tandavan-tendrombohitra vaovao. Amin'ity tranga ity, ny niavian'ny Altai massif dia azo zahana amin'ny alàlan'ny herin'ny tectonic fifandonana eo amin'i India any Azia.
Misy rafitra diso lehibe mandalo an'io faritra iray manontolo io ary Antsoina hoe lesoka Kurai ary lesoka Tashanta iray hafa. Ity rafitry ny lesoka iray manontolo ity dia miteraka fanosehana amin'ny endrika fihetsiketsehana mitsivalana, mahatonga ny takelaka ho mavitrika ara-tektonika. Ny fivezivezan'ireo vatolampy hita ao amin'ny Altai massif dia mifandraika indrindra amin'ny vato granita sy metamorphic. Ny sasany tamin'ireto vatolampy ireto dia nisondrotra be teo akaikin'ny faritra misy ny lesoka.
Ny niandohan'ny anaran'i Altai massif avy amin'ny Mongolia "Altan", izay midika hoe "volamena". Ity anarana ity dia avy amin'ny zava-misy fa ireo tendrombohitra ireo dia vatosoa tena gaga amin'ny olona rehetra noho ny fahasamihafana sy ny hatsarany.
Tahirin-jeografia an'ny Altai massif
Handeha any atsimon'i Siberia izahay izay misy tandavan-tendrombohitra telo lehibe hisongadinan'ny Tendrombohitra Altai, faritany mahafinaritra toy ny tontolon'ny natiora tsy mampino. Ireo haingon-tany ireo dia ny tampon'ny havoana avo indrindra amin'ny faritra atsimon'i Siberia antsoina hoe Mount Beluja. Manana haavo 4506 metatra izy ary fantatra ihany koa amin'ny maha-faritra manan-karena metaly azy. Any amin'ny tendrombohitra atsimon'i Siberia izy dia teraka avy amin'ireo renirano lehibe indrindra any amin'ny faritra atsinanan'i Russia.
Ny Altai Massif dia eo afovoan'ny Azia, sahabo eo anelanelan'ny 45 ° sy 52 ° ny latitude avaratra ary eo anelanelan'ny 85 ° sy 100 ° ny longitude Greenwich, ary eo anelanelan'ny faritany rosiana, sinoa ary mongoliana. Ny endrika fanampiana ankehitriny dia an'ny tampon-tampony, faritra tsy mitovy amin'ny haavo sy sakana ary lohasaha lalina. Izany fanamaivanana rehetra izany dia vokatry ny fivoarana ara-jeolojika sarotra. Ary izany dia tamin'ny faran'ny vanim-potoana Mesozoic dia ny tendrombohitra taloha dia noforonina tamin'ny fisoratan'i Hercynian ary niova tanteraka ho peneplain.
Efa tao amin'ny Tertiary, ny vala alpine no namelombelona ny tandavan-tendrombohitra iray manontolo, namaky sy namoaka ireo sakana isan-karazany. Ity fanarenana ity dia natao tamin'ny fomba malemy kokoa tao amin'ny Quaternary tamin'izany fotoana izany koa ny ony sy ny vongan-dranomaso nanao hetsika mahery vaika.
Toetrandro sy biodiversité
Hodinihintsika ny lafiny lehibe amin'ny toetrandro sy ny biodiversité an'ny Altai massif. Noho ny latitude sy ny toe-javatra eo afovoan'ny kaontinanta lehibe Eurasia, ny Altai massif Izy dia manana toetrandro mahery miaraka amin'ny toetrandro mahonon-tsaina sy kontinental. Kely sy avy ny orana. Ny haavony koa dia misy ifandraisany amin'ny toetrandro. Ny haavon'ny hafanana isan-taona dia midika fa misy sanda eo anelanelan'ny 35 degre miaraka amin'ny mari-pana ambanin'ny 0 degre amin'ny ririnina ary miaraka amin'ny fahavaratra fohy izay mety hihoatra ny 15 degre.
Io toetrandro io dia mampivelatra zavamaniry mamaly azy. Ala mikitroka, ahitra ary zavamaniry misy tohatra mahery izay mivoatra ao amin'ny Altai lehibe, akaikin'ny tany efitra Gobi. Eo ambanin'ny toe-tsaina 1830 metatra, ny hantsana dia ala matevina amin'ny hazo sedera, larches, pines ary birch. Eo anelanelan'ny ala sy ny fiandohan'ny lanezy dia misy haavon'ny 2400-3000 metatra ny haavony. Ny kijana Alpine dia hita manerana an'io faritra io.
Ny faritra be tendrombohitra misy ny Altai massif dia misy ifandraisany satria izy io dia mizara sisin-tany manasaraka ny renirano mankany amin'ny Oseana Pasifika sy ireo renirano izay mikoriana mankany amin'ny Oseana Glacier Arktika. Ny roa amin'ireo renirano manan-danja indrindra eran'i Azia dia manana ny loharano koa ao amin'ity massif ity: ny Obi sy ny Yenisei. Na eo aza izany, ny tena tambajotram-pitantanana hydrografika an'io faritra iray manontolo io dia ahitana renirano avy amin'ny farihy sy izay mibodo ny boriborin-dranomasina. Tsy mandeha amin'ny laoniny ny làlany satria ny fanamaivanana ny tendrombohitra no mahatonga azy io.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny Altai massif, ny toetrany ary ny niandohany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haibolantany » Altai Massif
Toetrandro sy allergy